ကိုဗစ်ကာလမှာ အိမ်သူသက်ထား ဇနီးမယားကို ဘယ်လိုရိုမလဲ? | သိလိုရာမေး
ထွေလာဆန်းပြား လိင်ဆောင်းပါး ကိုဗစ်ကာလမှာ အိမ်သူသက်ထား ဇနီးမယားကို ဘယ်လိုရိုမလဲ?
ဒါပေမယ့် အဆိုးထဲကအကောင်းအနေနဲ့ ခုချိန်က အိမ်ထောင်သည်တွေ၊ အတူနေဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ သမီးရည်းစားတွေအတွက် နှစ်ဦးကြားက အချစ်တွေ တိုးပွားစေဖို့ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အချိန်ကောင်းလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ဒီတော့ သိလိုရာမေးပရိသတ်တွေထဲမှာ အိမ်ထောင်သည်ဘဒိုတွေ၊ အတူနေချစ်သူရှိတဲ့ ဘော်ဒါတို့အတွက် ကိုဗစ်ကာလ အိမ်တွင်းအောင်းချိန်မှာ ကိုယ့်ချစ်ချစ်ကို ရိုနည်းလေးတွေကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) တော်ကီလေးနဲ့ ရိုမယ်…
သမီးရည်းစားဘဝမှာ တော်ကီတစ်ပေါက် လျှမ်းလျှမ်းတောက်နည်းနဲ့ ကိုယ့်မိန်းမကို အပီအပြင် ခြွေခဲ့လို့ ဒီအဆင့်ထိ ရောက်လာတာဆိုပေမယ့် အများစုကတော့ အိမ်ထောင်သည်ဘဝမှာ ချစ်စကားပြောတာတွေ နည်းသွားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ ဘဒိုအနေနဲ့ ခုလိုမျိုး ကိုဗစ်ကာလ အိမ်တွင်းအောင်း အချိန်ကုန်နေရတဲ့အချိန်မှာ ချစ်ဇနီးကို မနက်မိုးလင်းတိုင်း ဂရုတစိုက်နဲ့ ကြင်ကြင်နာနာစကားလေးတွေ ပြောပေးပါ။ ခုလို ကိုဗစ်ကာလမှာ အမျိုးသမီးတွေမှာလဲ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ စားဝတ်နေရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်တာမျိုးတွေ ရှိတဲ့အတွက် မင်းမိန်းမကို စိတ်မပူဖို့ အားပေးစကားပြောပါ။
(၂) အထိအတွေ့နဲ့ ရိုမယ်…
မိန်းမဆိုတဲ့အမျိုးဟာ အပျိုဘဝမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်ထောင်သည်ဘဝပဲ ရောက်ရောက် ကိုယ့်လက်တွဲဖော်က ကိုယ့်ကို ပြုစုယုယတာမျိုးတွေ အချိန်တိုင်း လိုချင်ကြတဲ့အမျိုးပါ။ ပါးစပ်က ထုတ်မပြောတာပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ မိန်းမနားကပ်ဖို့ အချိန်ရှိတုန်း သမီးရည်းစားဘဝတုန်းကလိုမျိုး အထိအတွေ့နဲ့ ရိုကြည့်ပါ။ ဉပမာ – သူ့နဖူးကို အနမ်းပေးတာတို့၊ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို သိုင်းဖက်ပြီး စကားပြောတာတို့၊ သူ့ကို ရင်ခွင်ထဲမှာ ထည့်ပြီး ရုပ်ရှင်တူတူကြည့်တာတို့ စတာလေးတေွ လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ အဲ… ဒီထက်ပိုတာလေးဆိုရင်တော့ အိပ်ရာပေါ်မှာလဲ ရိုလို့ရပါတယ် ချိဖတို့…
(၃) လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုနဲ့ ရိုမယ်…
ခုခေတ်မှာ မိန်းမနဲ့ ယောကျာ်း အတူရင်ဘောင်တန်းပြီး အလုပ်လုပ်နေရင်တောင် အိမ်မှုကိစ္စတွေ သားရေးသမီးရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် မိန်းမတွေထက် ယောကျာ်းတွေက အများကြီး ဝန်ပေါ့ပါတယ်။ ခုလိုမျိုး အိမ်မှာ အချိန်ပြည့် ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ အမျိုးသမီးဆိုရင် သူ့မှာ အိမ်မှုကိစ္စတာဝန်တွေက တဖက်၊ အလုပ်ကတဖက်နဲ့ တိုင်ပတ်ဖို့က ပိုများပါတယ်။ ဒီတော့ ခုလို အိမ်တွင်းအောင်းနေချိန်မှာ ထမင်း ဟင်း ကူချက်ပေးတာမျိုး၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေး ကူလုပ်တာမျိုး နဲ့ ကလေးတွေ ကူထိန်းပေးတာမျိုးတွေ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ သူမ့အနေနဲ့လဲ ပင်ပန်းမှုတွေ လျော့မယ်၊ ချိဖအပေါ်လဲ ယုံကြည်ကိုးစားမှုတွေ တိုးလာနိုင်ပါတယ်။
ခုပြောပြသွားတဲ့ သုံးချက်ကတော့ ကိုဗစ်ကာလ အိမ်တွင်းအောင်းနေချိန်မှာ အိမ်ထောင်သည်ချိဖတို့ ကိုယ့်ချစ်ဇနီးကို ပြုလုပ်ပေးလို့ရနိုင်မယ့် ရိုနည်းလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရိုနည်းလေးတွေကို အသုံးချပြီး အိမ်တွင်းအောင်းကာလမှာ ကိုယ့်မိန်းမရဲ့ အချစ်တွေကို ထာဝရသိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့ ဘဲကြီးတွေ ဖြစ်ပါစေလို့ သိလိုရာမေးက ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ…